Ọhụrụ Mac OS X EL Capitan ga-eme ka a usu ọhụrụ atụmatụ. Iji n'ụzọ kwesịrị ekwesị-enwe ndị a ọhụrụ atụmatụ ọ dị mkpa ka nwere ikike ịdọkapụta ngwaọrụ. Otu ebe na yiri ka na-akpali akpali bụ video nakwa iji na-enweta ya nke ọma, ị ga-mkpa a ọma video Ntụgharị na bụ dakọtara na El Capitan.
N'ihi nke a, isiokwu a ga-enye gị nke 15 nke kasị mma video converters na azụmahịa. Otú a ị ga-enwe ike ịhọrọ otu nnọọ mfe.
Nkowasi: nkwụnye bụ video Ntụgharị software nke e wepụtara site Macroplant na ọ bụ nnọọ mfe iji. Nkwụnye mfe atọghata na-eme ka vidio ndị na-dakọtara maka ezigbo arụmọrụ na iPhone, iPod na ngwaọrụ ndị ọzọ gụnyere Blackberry.
• Ọ bụ 100% free
• Ọ na-arụ ọrụ nke ọma iji tọghata videos a ọnụ ọgụgụ nke formats
• The videos converted nwere ike na-arụ ọrụ na ole na ole ngwaọrụ
Nkowasi: Ọ bụ na mbụ a akụkụ nke Final Cut Studio ngwugwu ọ bụ ezie na ọ bụ ugbu a standalone ngwa. Ọ bụ a nwa nke ọtụtụ video editọ ndị hụrụ na ọ bụ mfe iji ma ukwuu oru oma interface.
• Ọ bụ ukwuu irè
• Enyele a nnọọ iche iche nke tupu tent maka converting ka DVD, H.264 na Web FCP
• Ọ bụghị free. Ọ ga-eri gị $ 49 nweta akwụkwọ ikike
• Ọ na-apụghị-eji nyefee Windows Media ma ọ bụ Flash formats
Nke a ngwa e otuto n'ihi ya ọzọ na-emesapụ aka mma set. Ọ na-enye oké àgwà video na a dịgasị iche iche nke formats. Ọ na-abịa na a arụmọrụ na-akpaghị aka uploads gị video ka ihe nkesa na mgbe mkpakọ, na-azọpụta gị a otutu oge.
• Ọ nwere a pụrụ ịdabere na ọrụ enyi na enyi interface
• azọpụta oge site na-akpaghị aka na-ebugote gị video ka ihe nkesa na mgbe mkpakọ
• Ọ nwere otutu oké atụmatụ
• Mgbe $79.95 na ọ bụ obere na oké ọnụ n'akụkụ ruo ọtụtụ ọrụ
Ọ bụ ezigbo Ntụgharị mgbe ị na-achọ iji tọghata ma ọ bụ nkwado ndabere na mpaghara DVD video. The DVD videos converted na-ahụ kachasị maka ị na-elele na ngwaọrụ dị ka iPhone na iPad n'etiti ndị ọzọ. Ọ na-enye gị ohere iji recompress a nnọọ nnukwu DVD faịlụ na dabara ya na a ọkọlọtọ DVD.
• Ọ dị ukwuu n'ihi na converting DVD videos
• The eziokwu na i nwere recompress a nnukwu DVD faịlụ bụkwa ezi kemfe
• Ọ na-arụ ọrụ maka DVD videos
• N'ihi nanị na nke a na otu usoro ọ bụ nnọọ ihe dị oké ọnụ na $49.99
5. na nwunye
Nke a bụ ọkachamara ọkwa video Ntụgharị ngwá ọrụ N'ihi ya ya $ 495 price mkpado. Ọ nwere ọtụtụ atụmatụ na-ekwe ya ka ọ bụrụ zuru okè n'ihi na converting a ọnụ ọgụgụ nke atụmatụ. The software-enye gị ohere ịhụchalụ gị video tupu ngbanwe ihe ọzọ video ngbanwe ngwa na-ma na-egbo.
• The eziokwu na i nwere ike ịhụchalụ a video tupu ngbanwe bụ nnọọ bara uru
• All nke ya atụmatụ na-e na àgwà n'uche
• Ọ bụ obere oke ọnụ maka ojiji nkeonwe
• Personal ọrụ nwere ike ịhụ na ọ obere oke mgbagwoju anya karịsịa mgbe ha na-eji ya n'ihu
6. breeki aka
Dị ka otu n'ime ndị kasị ewu ewu DVD-ripping transcoders, breeki aka mepụtara a aha n'ihi ịbụ nri ngwá ọrụ maka ọrụ. Nke a n'elu nke eziokwu ahụ bụ na ọ bụ kpam kpam free-eme ka ọ n'elu oke maka ojiji nkeonwe.
• Ọ na-mgbe niile mma na emelitere n'ihi na nke oghe isi ọdịdị
• mmepụta bụ na elu àgwà
• Ọ na-atọghata video ka dị nnọọ ole na ole nke formats
7. Wondershare Video Ntụgharị
Ọ bụ oké Ntụgharị maka ojiji nkeonwe ebe ọ tackles ọtụtụ ndị mfe video ngbanwe aga-eme na anyị na-enwe na ihe kwa ụbọchị. Ọ na-ekwe maka akakabarede a ọtụtụ dị iche iche formats na ọbụna enye gị ohere tinye a watermark ka video tupu exporting.
• iji mee ka ọ dị mfe maka ọhụrụ ọrụ iji ngwa
• Ọ dịla oké atụmatụ na otutu mmepụta formats ịhọrọ ụdị
• Ọ bụ nnọọ irè na nnọọ mfe iji
• Ọ bụghị free. Ọ ga-eri gị $39.95 inweta ohere ka ya niile atụmatụ
Nke a ngwa bụ definition nke mfe ma ukwuu irè. Eziokwu ahụ bụ na ọ bụ na-free-eme ka ọ na ezigbo oke maka ndị na-achọ iji tọghata videos ihe onwe onye ikiri.
• Ọ bụ 100% free ibudata na-eji
• Ọ nwere nnọọ mfe interface
• N'ihi na nke mfe, ọ nwere ike ghara ịbụ ezigbo maka ọzọ ndị ọkachamara ngbanwe
Ọ bụ ihe kasị oké ọnụ video ngbanwe software na ndepụta a eleghị anya na ụwa. Ọ bụkwa ihe kasị ọkachamara na-enye ọrụ ikike nke ịchịkwa akụkụ nile nke ngbanwe usoro. Ị nwere ike encode ka bụla mara video Ọkpụkpọ na ya abịa na-enye-plugins-ekwe ka ị kpọmkwem iwekota n'ime gị NLE.
• Ọ na-enye gị ohere nnwere onwe na-encode Otú ọ dị na ị chọrọ
• ya atụmatụ na-e na-emepụta ọkachamara àgwà mmepụta
•-arụ ọrụ na-emepụta dị nnọọ banyere niile video formats
• na $ 799 ọ bụghị a ezi uche oke maka ndị chọrọ ya kpere maka ojiji nkeonwe
• Ọ pụrụ ịbụ nnọọ mgbagwoju anya na-arụ ọrụ
Ọ nwere ihe mfe iji interface nke hụ ya ka ọ ọtụtụ ndị chọrọ a pụrụ ịdabere na video encoder maka ojiji nkeonwe. Ọ na-abịa tupu tent maka iPad, Apple TV, Wii na Xbox.
• Ọ bụghị ezigbo maka ọkachamara ojiji
Nke a software bụ ezigbo maka ọkachamara ojiji na-abịa gụnyere ndị ọzọ Adobe ngwaahịa ndị dị ka a nkwado ngwa. Ọ bụ dakọtara na niile video format na ụdị na-na-enye ohere maka omenala template e kere eke.
• Ọ bụ ukwuu ọkachamara si otú abịa na incredibly bara uru atụmatụ
• Ọ e ji elu arụmọrụ ngbanwe dapụtara na elu àgwà mmepụta
• Ị nwere ike ghara inwe ya dị ka a standalone ngwa
Nke a n'ji dabeere ngwa e mere na-isi aka DVD Filiks. Ọ dị ukwuu n'ihi na a na-edegharị na decompressing DVD videos. Ọ ga-enuba ozugbo gị Mac gị TiVo set.
• Ọ bụ ọrụ enyi na enyi na mfe ịnyagharịa
• Ọ bụ nnọọ oru oma
• Mgbe $49.95 na ọ bụ obere na elu n'akụkụ na okwu nke na-eri
• Ọ na-arụ ọrụ na DVD
nke a ukwuu mgbanwe ngwa kemgbe bara uru ka ọkachamara encoders ruo ogologo oge ugbu a. Ọ nwere ike na-agụ ma na-egwu a ọnụ ọgụgụ nke video formats na bụ nnọọ uru na transcoding ọtụtụ na agbasa ozi n'ikuku ụkpụrụ.
• Ọ bụ nke ukwuu mgbanwe, na-mfe iji
• Ị nwere ike ibudata na-azọpụta vidiyo si na YouTube na saịtị ndị ọzọ nanị site na itinye video URL
• Ọ na-adịghị arụ ọrụ nke ọma na DVD
14. Miro Video Ntụgharị
Nke a ngwa-abịa na iPad kpọmkwem tupu tent-eme ka ọ na ezigbo video Ntụgharị maka iPad playback. Ọ na-optimizes maka ndị ọzọ iOS ngwaọrụ na a usu Android ngwaọrụ dị ka mma.
• Ngwaọrụ kpọmkwem-eme ka ọ ezigbo maka ojiji nkeonwe
15. Media Ntụgharị
E mere ya na-arụ ọrụ dị ka a ogbe media Ntụgharị. Ọ na-arụ ọrụ fọrọ nke nta niile video formats na bụ nnọọ mfe iji. Ọ bụ ezigbo maka onye video akakabarede ojiji.
• Ọ bụ free
• Ọ bụ nnọọ mfe iji na-atọghata ndị kasị ewu ewu na formats
• Ọ bụ ukwuu n'ime a n'ji ngwa na ya mere adịghị mma maka ọkachamara oru ngo
> Resource> Naghachi> Top 15 Video converters maka Mac OS X EL Capitan